चामात्कारिक अौषधि हो आँपको पात, कुन रोग लाग्दा खाने ? (विधिसहित) – Complete Nepali News Portal
चामात्कारिक अौषधि हो आँपको पात, कुन रोग लाग्दा खाने ? (विधिसहित)
December 29, 2016	5,385 Views
एजेन्सी । हाम्रो घर वरिपरि अायूर्वेदिक उपयोग हुने विभिन्न झारपातहरु भएपनि हामीलाई कुन रोग लाग्दा कसरी खाने भन्ने ज्ञान नहुँदा त्यसै खेर गइरहेको हुन्छ । त्यस्तै अाज हामी तपाईलाई त्यस्तै अायूर्वेदिक वस्तुको बारेमा जानकारी गराउँछौं जसले एउटा गम्भीर रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत गर्छ ।
यस्तो छ तरिकाहरु
पहिला १०-१५ वटा अाँपको कलिलो पातहरु टिप्नुहोस् र त्यसलाई भाँडामा हालेर केहीबेर उमाल्नुहोस् ।